Desambra 26, 2018 ecommerce Computer, Electronics, OS-STORE, OSGEAR Support, Products, Storage, teknolojia 0
Ampiasao ny toromarika Fanamboarana eto ambany raha mametraka CD, DVD na ny Blu-ray fiara dia tsy afaka mamaky izay Discs na tsy afaka mamantatra na Discs.
Ny torolalana dia hanampy anao hamaha ny olana amin'ny toe-javatra sasany, raha ny fiara tsy nahomby tanteraka. Ny torolalana etsy ambany dia azo ampiasaina ho an'ny anatiny sy ivelany CD, DVD na ny Blu-ray aelin'ny fa ny sasany amin'ireo fototra mety ho samy hafa kely. Raha ny resaka CD-ROM tsy miasa mety hahasosotra ny mpampiasa, dia mety hiteraka fahaverezan 'ny tahirin-kevitra, hanakorontana fomba ara-dalàna ny asa, sy ny sisa. Ny fahalalana handresy ny diso amin'ny CD-ROM tsy miasa dia manampy raha te hamaha ny fahadisoana amin'ny tsy tanteraka ny fotoana. Ao amin'ny lahatsoratra nomena, isika, dia hijery vahaolana maro mba hamaha ny olana momba ny CD-Drive tsy miasa.
Fizarana 1: Amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana Hardware sy Troubleshooter >>>
Izany no fototra fomba mba manala ny olana ny CD-Drive tsy miasa. Amin'ny dingana tsotra vitsivitsy mba hanaraka, mpampiasa dia afaka manana ny DVD sy CD-ROM neken'ny ny rafitra. Ireto ny dingana:
Tsindrio ny Windows fanalahidy + R mba hanokatra ny Run diniky boaty.
Ao amin'ny Control Panel, mahita amin'ny mahitsizoro fikarohana, sy ny karazana 'Troubleshooter', ary avy eo dia Peho 'Fanamboarana'.
Tsy maintsy tsindrio eo amin'ny 'Tefeo ny fitaovana' izay eo ambanin ny Hardware sy Feo Item. Users mety hahazo bitsika mba mitendry ny tenimiafina noho ny fandraisana ho mpikambana.
Raha izany no tsy hamaha ilay fahadisoana, dia afaka mifindra ho amin'ny vahaolana manaraka.
Fizarana 2: Ny antony mahazatra indrindra ny kapila no Tsy Ampy >>>
Tsy toy ny fiara mafy ny sambo tamin'ny eny-ny-talantalana solosaina na ivelany fiara, aelin'ny mafy fanampiny ianao hividy foana tsy alefa format sy vonona ny hampiasa. fa tsy, ry zareo ao amin'ny fanjakana banga tanteraka-ny hevitra dia ny hoe mpampiasa ny farany dia manao izay tiany ny fiara, ka tsy misy soa ho preformatting na raha tsy izany ny fanovana ny fiara tao amin'ny orinasa. Toy izany, rehefa mametraka ny fiara ao an-system, Windows fotsiny miandry anao hanapa-kevitra izay tokony hatao amin'ny fiara fa tsy ho azy fandrafetana sy fanampiana izany ho any amin'ny fiara lisitra.
dingana 1: tsindrio Start > Run. nitendry in ” sysdm.cpl ” ho any amin'ny diniky boaty fa mampiseho. Tsindrio maninona ary dia tokony hitondra anao any amin'ny “System Properties” fifanankalozan-kevitra boaty.
dingana 2: Mandehana any amin'ny kiheba “Hardware” ary tsindrio “Mpitantana Fitaovana” indray mandeha toerana misy ny mpamily. Mine atao hoe “DVD / CD-ROM aelin'ny.” Kitiho in-droa izany mba hanehoana ny ao anatiny, ary tokony hisy fitaovana iray hafa ambaniny. Mine nanana fanontaniana marika fa amin'ny toe-javatra sasany, dia mety manana tsoraka akaikin'ny anarana. Mine atao hoe “AOPEN DUW1608 / ARR” fa raha ny amin'ny dia tsy mitovy, tsy maninona.
dingana 3: Double-tsindrio ny vao nambara fitaovana “AOPEN DUW1608 / ARR” Ary ny diniky ny efajoro hiseho. Mandehana any amin'ny “Driver” kiheba sy Select “Update Driver…” avy ao amin'ny bokotra eto ambany.
dingana 4: ankehitriny, mifidy “Hametraka avy amin'ny lisitra na toerana manokana” ary tsindrio Next. Ao amin'ny efajoro manaraka mifidy “Aza karohy. Aho hisafidy ny mpamily mba hametraka” ary indray, tsindrio manaraka. Ny hafa dia mampiseho amin'ny efajoro mifanaraka fitaovana ho an'ny mpamily. I fidiana avy ao amin'ny ambany mino ihany fa ny farany indrindra, dia nataony hoe “CD-ROM Drive [IMAPI Fikirana 1,5].” Tsindrio manaraka ary hamita ny toromarika dia manome anao.
Fizarana 3: Angamba nateraky ny diso DVD >>>
Click fitaovana vakizoro
Click fitaovana mpitantana
Œ Ata / ATAA maso sekta roa Click ide fantsona
Tsindrio eo amin'ny toerana mandroso vakizoro
Device 0 na 1 Tokony ho amin'ny Ultra DMA (tsy ambaratongan-tombontsoa) amin'izao fotoana izao dia tokony ho famindrana hafainganam-pandeha Ultra DMA
(Raha tsy) esory fitaovana fiara sy ny DVD fiara (in ny raharaha dia Mpisava Lalana fiara) – reboot solosaina mba reinstall – indray mandeha indray reinstalled reboot solosaina – Avereno 1 – 7 indray fa toe-javatra roa ireo indray hiringiriny sy ny olana tafatoetra.
Part4: Manova Optical fiara taratasy fanendrena >>>
By toerana misy anao, dikan-Windows rehetra manendry ny Optical fiara manaraka fiara misy taratasy manaraka na inona na inona eo an-toerana ireo boky. Raha toa ianao mametraka ny fanampiny taty aoriana kapila mafy na repartition ny fiara mba hamorona boky fanampiny, ny taratasy nomena ny Optical fiara dia mety hanova, izay mety hampifangaro nametraka rindrambaiko izay miezaka ny mahazo ny Optical fiara toy ny taratasy antitra.
Afaka tsy izany “mozika seza” reassignment ny Optical fiara tanana taratasy fanendrena ny Optical fiara ny fiara taratasy izay avo noho ny fiara efa misy taratasy na inona na inona eo an-toerana na ny tambajotra boky. Fanendrena ny ambony indrindra fiara misy taratasy, miaraka, ny Optical manakana fiara mandrakizay Windows avy manova izany taratasy fiara. Raha manana Optical roa aelin'ny, omena azy ireo Z: ary Y:. To manendry fiara hafa taratasiny ho an'ny Optical fiara in Windows XP, Araho ireto manaraka ireto:
Computer Management mitondra fiara mampiseho taratasy fanendrena
1. Control Panel From, mifidy Administrative Tools > Computer Management.
2. Hanitatra ny hazo raha ilaina ny mampiseho zavatra ao amin'ny sampan'i Storage.
3. Tsindrio kapila Management, ary toerana ny Optical fiara ao amin'ny ambany-tsara pane.
4. Right-tsindrio ny Optical fiara kisary maneho ny teny manodidina-mora sakafo, sy mifidy ny Change Drive soratra sy ny lalana sakafo zavatra mba haneho ny Fiovana Drive soratra sy ny lalan-diniky.
5. Tsindrio ny bokotra Change sy mampiasa ny rano indray mitete-midina mba manendry lisitra iray misy fiara taratasiny ho an'ny Optical fiara.
6. Vonjeo ny fanovana sy ny fivoahana. Rehefa manaiky ny fanovana, ny taratasy fiara vaovao Mila kery avy hatrany.
Musical fiara TARATASY NOSORATAN'I
Raha hanova ny fiara taratasy fanendrena ho Optical fiara, hanao izany avy hatrany rehefa avy fametrahana ny fiara na ny rafitra fandidiana. Raha toa ianao ka mampiasa ny fiara eo ambany ny taratasy am-boalohany mba hametraka rindrambaiko, fa ny rindrankajy no aoriana hiezaka mba hahazoana ny fiara mampiasa ny fiara antitra taratasy.
Ater izay, ny mpamily dia tokony ho miasa tsara. Get mila fanazavana fanampiny, Kitiho eto
OSGEAR UW600 USB WIFI Wireless WLAN Card Mpamily for Windows Mac Linux Download
HD Graphics Samsung Public Tanjona Intel 64-kely Windows Series Driver Support Finday OS-STORE Processor teknolojia processors mpitantana Fitaovana Technology_Internet Nokia Unité centrale Software HTC Device Model fandikana ara-dalàna mpamily fanohanana
Unité centrale Series Driver Support Finday teknolojia Samsung Galaxy 64-kely Windows HD Graphics Public Tanjona Technology_Internet Processor Nokia mpitantana Fitaovana processors Software mpamily fanohanana finday avo lenta OS-STORE Sony Ericsson Qualcomm Samsung fandikana ara-dalàna HTC Intel Server Device Model Intel